इटाली किन पर्‍यो कोरोनाको चपेटामा ?
इटाली किन पर्‍यो कोरोनाको चपेटामा ? एकै दिन ७४३ को मृत्यु, संक्रमणको दरमा भने कमी
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत १२, २०७६, ०६:०५
एजेन्सी–इटालीमा कोराना भाइरसका कारण मंगलबार एकैदिन ७४३ जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबारको तुलनामा आइतबार र सोमबार मृतकको संख्या घटे पनि मंगलबार पुनः आकाशिएको हो। योसँगै मृतकको संख्या ६ हजार ८ सय २० पुगेको छ।
संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा पूरै इटली लकडाउन गरिए पनि कोरोना भाइरस अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। कोरोनाबाट उत्तरी सहर लोम्बार्डी सबैभन्दा बढी चपेटामा परेको छ।
आखिर इटाली यसरी किन बढी प्रभावित बन्यो ? महामारी विशेषज्ञ पियरलुईजी कोकोले भनेका छन्, ‘यहीकारण हो भनेर अहिले नै ठ्याक्कै भन्न गा¥हो हुन्छ, यसका कैंयौं कारण हुन सक्छन्, एउटा त आनुवंशिक हुनसक्छ। केही मानिस त लक्षणविना नै कोरोना संक्रमित भएका छन्, कैयौं मानिसले यो संक्रमणको सामना गर्न सकिरहेका छैनन्, यो त्यही देश हो, जहाँ सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक रहन्छन्, बढी उमेरका मानिस संक्रमणको चपेटामा चाँडै पर्छन्, यिनीहरुलाई बचाउन मुस्किल पर्छ।’
विशेषज्ञ कोकोका अनुसार इटालीको सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधिले पनि संक्रमण फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ। यहाँ मानिसहरु समूहमा मिलेर बस्छन् र आपसमा चुम्दै प्रेम दर्शाउँछन्, परिवार पनि निकट हुन्छन्। यस्तै, उत्तरी क्षेत्रमा मृत्युदर बढी हुनुको कारण वायु प्रदुषण पनि कारक हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
इटालीमा मृत्युको आँकडा बढे पनि केहीदिनदेखि संक्रमण दरमा कमी आएको छ। सामाजिक दूरीमा कडाइका कारण पनि कमी आएको हुनसक्छ। हालसम्म यहाँ कोरोना प्रभावितको संख्या ६९ हजार १ सय ७६ पुगेको छ।
रोल्पा र जाजरकोटका १९ मजदुर सिन्धुपाल्चोकमा अलपत्र उनीहरुको समूहमा दुई महिला र र १७ पुरुष छन्। अलपत्र पर्नेमा रोल्पाका ६ र जाजरकोटका १३ जना छन्। शुक्रबार, चैत २८, २०७६
कोरोना भाइरस : महामारीको सय दिनमा विश्वले गुमायो ९५ हजार बढी मानिस करिव एक सय दिनअघि विश्वमा नयाँ भाइरसको प्रकोप सुरु भएको थियो। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको काेराेना भाइरसलाई सुरुमा फ्लूको रुपमा सब... शुक्रबार, चैत २८, २०७६